Utshwala ukudakwa - Izimpawu kanye Ukwelashwa
Impilo, Izifo nemibandela
A Eqinisweni owaziwa ukuthi igazi yomuntu ephile iqukethe akukho kuka 0.4 mille utshwala, ngamunye kwakhiwa okuyinto by izinqubo yokubola emathunjini (ngokubheka: ppm - lena omunye kwabayishumi iphesenti). Wonke la manani Okungaphezu kwalokhu sibalo, kakade kubhekwe yotshwala ukudakwa.
Nokho, ekuphileni kwansuku zonke, futhi nomsebenzi wezokwelapha ngaphansi kwencazelo ukudakwa utshwala kwakusho ukuthi ngezinga elithile zokudakwa, okuyinto esongela impilo yabantu. Futhi lesi simo sibangelwa okuqukethwe utshwala egazini, okuyizinto oda ezidlula ephakeme kunaleyo amazinga evamile.
Yiqiniso, ukuphila umuntu singenakwenzeka uzoqala ukuba afeze ukuhlolwa kwegazi, ngokuvamile, abantu ukuchaza degree lokudakwa ngokubukeka nokuziphatha. Heavy utshwala ukudakwa kwenzeka endabeni lapho okuqukethwe utshwala igazi idlula 3%. Kuleli zinga, ku zokudakwa bangase balwisane umsebenzi inhliziyo, iziyaluyalu zokuphefumula, futhi kamuva - ikhoma. umthamo Lethal okwesikhathi ukwamukelwa womuntu ucabange lemali utshwala ngokuya 100% utshwala, kuyinto 300-400 amagremu.
Akunakwenzeka ukunikeza umthamo ngqo, ngemva kwalokho kufika ukudakwa utshwala, kubantu abahlukene, lesi sibalo zizohluka. Izimpawu utshwala poisoning zihlanganisa:
nokuvaleka kwemigudu yokuphefumula;
ukwehluleka uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi;
engalawuliwe amathe ngokweqile.
Uma indoda manifest utshwala ukudakwa, izimpawu abalwe ngenhla, sicela ubheke odokotela. Ezimweni ezimbi kakhulu, kudingeka ucele lamabutho ukwelashwa izidakamizwa ekhaya noma isiguli esibhedlela emtholampilo onguchwepheshe.
Kuleso simo, uma kwatholakala ukuthi nginesifo utshwala ukudakwa, ukuphathwa kuyoba ukuthatha izinyathelo detoxify noma, ngamanye amazwi, ukuze ahlanze umzimba utshwala. Futhi esetshenziswa ekwelashweni lingaze, ukuthi kuhloswe nokugcina ukusebenza evamile izitho zangaphakathi.
Uma utshwala ukudakwa akuyona uzwakalise kakhulu, ungasiza umuntu nekhaya amakhambi. Ngakho-ke, ikhambi kangcono ukudakwa kuyinto ubuthongo obumnandi odakiwe ngakho kufanele abulawe embhedeni. Ukuze iwenze ube lula isimo kungenziwa wageza esiswini zokudakwa, usebenzisa enganamandla kakhulu isixazululo potassium permanganate. Kuyasiza ukuthatha amaphilisi ambalwa namalahle isebenze. Inani amaphilisi kuyakhethwa esekelwe isisindo zomzimba womuntu. Ngokwesibonelo, umuntu enesisindo kg 60 kufanele baphuze amaphilisi 6, amaphilisi ie for konke okusindayo kg eziyishumi.
Kodwa itiye eqinile noma ikhofi odakiwe ukunikeza akufanele ke, ngoba lezi iziphuzo lihambisana utshwala kungaholela spike e ingcindezi. Ngakho-ke, uma umuntu ufuna ukuphuza udakwe, kungcono ayinike amanzi elula noma ushukela, juice noma compote. Phuza uketshezi kudingeka ngangokunokwenzeka, ngakho ubuthi izosuswa ngokushesha. Kuyasiza kakhulu kulesi simo itiye Mint.
Lapho ubuthi oludakayo excreted kabanzi okukhipha potassium nosawoti, ngakho yokutakula Kunconywa amabhilikosi, amazambane abilisiwe, sauerkraut, kanye isiphuzo brine.
Uma, usizo Nokho, utshwala ukudakwa akwenzile lo muntu ngeke noma izenzo ezingalungile, imiphumela ingaba Kuyadumaza. Ikakhulukazi engozini abantu abathile nezifo ezingamahlala khona. Ngokwesibonelo, umfutho wegazi ophakeme ubuthi ngotshwala ungase uthole unhlangothi ngenxa okhuphuka wegazi, futhi abantu abanesifo sikashukela, - awela equlekile.
Ngakho-ke, qaphela kakhulu ukusingatha utshwala, ukuba bangalokothi basebenzise kabi bese uzama hhayi ukuphuza utshwala, izinga okuyinto ungaqiniseki. Futhi uma enkingeni okwenzekayo - afune usizo lwezokwelapha ngokushesha.
Izimpawu STD: kanjani ukuqaphela?
Indlela esiphatha ngayo isifuba esomile ekhaya?
VSD: ukuthi kuyini nokuthi indlela yokuphatha kulo?
Ngifundise ngesifo sikashukela: bangaki abahlala naye? Kanjani ukuphila sikashukela?
Ukuvimbela yisifo senhliziyo: amalungiselelo nezeluleko uDkt
Uwoyela amaranth - izibuyekezo, isicelo, Izimo
I ukuboshwa nokunqunywa Louis 16, inkosi yaseFrance
Cream "Isikhumba King": ukubuyekezwa. Wamafutha "lesikhumba yinkosi" ekwelapheni psoriasis futhi eczema
Eyokuqala elimhlophe-itshe ezibiyele eMoscow
Cafe "Baku" (Bryansk) - I-ikhefu okunethezeka
Indlela ukuqeda izikelemu
Impilo yabesifazane: prolapse wesibeletho.
Yokucasuka imbilapho ezingabantu: Ubangela, zokuvimbela
Umlando kanye nencazelo "isimo oda"
Esebenza ngogesi ezinyonini ngezandla zabo kusuka ezihlukahlukene imfucuza
Amanzi dill izinsana
Nokwenza Esiphumelelayo - ngokulungile ekhethiwe Uhlelo!